प्यान्ट र सुरुवाल बिना देखिए यी अभिनेत्री, सामाजिक संजालमा गरियो भद्दा कमेन्ट र ट्रोल ! – Kavrepati
Home / मनोरंजन / प्यान्ट र सुरुवाल बिना देखिए यी अभिनेत्री, सामाजिक संजालमा गरियो भद्दा कमेन्ट र ट्रोल !
admin August 5, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 91 Views
एजेन्सी – कलाकारहरु आफूलाई अरु भन्दा भिन्न र आकर्षक देखाउन विभिन्न प्रकारका फेसन अपनाउँछन्। कहिले काहिँ ती फेसनहरु अपाच्य समेत हुन पुग्छन्। फलस्वरूप उनीहरु सामाजिक संजालमा आलोचित मात्र नभई मजाकको पात्र पनि बन्छन्।
फेसनको मामलामा बलिउड नायिकाहरु पनि कम छैनन्। बलिउड नायिकाहरु समय अनुसार विभिन्न प्रकारका फेसन गर्छन्। बलिउड नायिकाहरु भड्किलो फेसन गर्दा आलोचित भएको धेरै उदाहरण छन्। त्यसमध्ये धेरै प्यान्ट नलगाएको कारण आलोचित हुने गरेको पाइन्छ। त्यसमध्ये केहि जानकारी निम्न छ।
करीना कपूर खान-सामाजिक संजालमा धेरै सक्रिय रहने गरेकी करीना नियमित जस्तै तस्विरहरु पोस्ट गर्छिन्। एकपटक करीनाले पति सैफ अली खानको शर्ट लगाएर बोल्ड फोटोशुट गरेकी थिइन्। तस्विरमा उनी शर्टमा मात्र देखा परेकी थिइन्, उनले प्यान्ट लगाएकी थिइन्। उक्त तस्विरका कारण करीनाको सामाजिक संजालमा व्यापक ट्रोल भएको थियो।
उर्वशी रौतेला-बलिउडकी सबै भन्दा बोल्ड नायिकाको सूचीमा पर्ने उर्वशी रौतेला पनि सामाजिक संजालमा कम सक्रिय छैनन्। सामाजिक संजालमा बोल्ड तस्विर अपलोड गरेर उनले चर्चा बटुल्ने गरेकी छन्। केहि समय अगाडी मात्र एक फोटोशुट गराएकी थिइन्। उक्त तस्विरमा निलो शर्टमा देखिएकी थिइन्। उनले पनि प्यान्ट लगाएकी थिइन्। प्यान्ट नलगाएका कारण धेरैलाई उनको तस्विर मन परेन। फलस्वरूपले ब्यापक ट्रोलको सामना गर्नुपर्यो।
Previous लुगा नलगाइकन सुत्नेहरूलाई मिल्छ यी ५ फाइदाहरू
Next कस्तो पुरुष संग बढी रुचि राख्छन् महिलाहरु जान्नुहोस् यि ५ कुरा